Malunga nathi - iTeknoloji yokubonisa ngokugqibeleleyo Co., Ltd.
EBONAKALAYO EBONISA TECHNOLOGY CO., LTD
Umboniso ogqibeleleyo weThekhinoloji Co., Ltd. yasekwa ngo-2006 kwaye ukusukela ngoko siye saphuhliswa saba ngumvelisi ophambili weemveliso zeLCD kunye nemiboniso ye-LED, kubandakanya iimonitha zeMidlalo, iiMonitor zeCCTV, iimonitha zokujonga zikawonke-wonke, ii-PC ezi-In-One, iiMpawu zedijithali kunye Iibhodi ezimhlophe eziHlangeneyo. Ngomzi mveliso we-15,000 m2, i-2 oluzenzekelayo kunye ne-1 imigca yemveliso yemanyuwali sinesakhono semveliso seeyunithi zesigidi ngonyaka. Ngenxa yokwanda okuqhubekayo kungekudala siza kufudukela kumzi-mveliso omtsha, omkhulu kakhulu, sonyusa amandla ethu ukuya kwiiyunithi ezingaphezu kwezigidi ezibini ngonyaka
Sichitha isixa esikhulu semali yethu kwiPhando noPhuhliso kwaye siqinisekile ukuba siza kubonelela ngezona zibekiweyo zibalaseleyo kwaye sibonisa iimveliso ezikhoyo kwihlabathi liphela. Sisoloko sizama ukwenza izinto ezintsha nokucokisa imveliso yethu, kunye neemveliso ezintsha ezinikezelwa rhoqo. Iingcali zethu ze-R & D ezinamava zihlala zisebenza kuyilo lweemveliso wena nomthengi olifunayo kwaye ufuna. Sikwabonelela ngeenkonzo ezipheleleyo ze-OEM kunye ne-ODM, ke ukuba ufuna imveliso ethile siqinisekile ukuba singayila kwaye siyenzele yona.
Siyazingca ngokungabi sesona sitshiphu kwimarike njengoko sikholelwa ekubeni kufuneka sakhe okanye sivelise umgangatho, hayi ngexabiso! Ngale nto engqondweni sisebenzisa kuphela izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni, ukusuka kwiiphaneli ukuya ezantsi kwi-resistors.
Inkampani yethu iphumelele imigangatho ye-ISO yamva nje, kubandakanya i-ISO9001: 2015 kunye ne-ISO14001: 2015, ukuze usebenze nathi ngokuzithemba. Ukongeza, zonke iimveliso zethu zineCCC, CE, FCC, RoHS, Reach, WEEE kunye ne-Energy Star certification, kunye nokuqinisekiswa kwe-UL kuyafumaneka ngentlawulo.
Ifilosofi yethu yeshishini isekwe kwimigaqo ephambili emi-4 -Ukunyaniseka, ukuYila, uMgangatho kunye neNkonzo
Yinjongo yethu ukuba sibe ngumenzi ophambili weemveliso zokubonisa emhlabeni, kwaye siyakholelwa ukuba sisendleleni yokufezekisa le njongo.